Halkee Buu Caawa Seexanayaa Madaxwayne Farmaajo?
Monday March 12, 2018 - 22:55:21 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
madaxweynaha jambuuriyadda federaalka mudane farmaajo ayaa caawa ku hoyonaya wasaaradda gaashaandhigga ee ku taalla degmada deyniile ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale madaxweynaha waxaa kula hoyanaya xarunta madax dowladda oo iyagana go’aanka la qaatay.
xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu madaxweynuhu uu caawa ku hoyanayo ayuu si toos ah ugu guuray iyadoo warar hoose aan helay ii xaqiijiyeen inuu xafiiskiisii shaqada xataa hakaasi uu u raray.
ugu danbeyn madaxweynaha ayaa maalmaha soo socda hagi doonna ciidanka oo idil wuxuuna qaatay go’aankii ugu danbeeyay ee dagaal waxaana uu isla caawa uu wataa dharka militariga isagoo qabowga la jiifan doonna ciidanka.